सरिता थारू	|| 26 October, 2021
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) आवेदन खुला गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण विगत ६ महिनादेखि बन्द रहेकोे अनलाइन आवेदन सोमबारदेखि खुलेको हो । अब नयाँ आवेदन भर्नेहरु नयाँँ नियममा लिखित परीक्षा र ट्रायल दिन पाउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा.लोकनाथ भुसाल बताउँछन् ।
देशभर २१ वटा कार्यालयबाट अनलाइन आवेदन दिन सकिन्छ । कार्यालयको चाप अनुसार पालो आउने भुसालले बताए । ‘नयाँ आवेदन दिनेहरुले उपत्यकाको हकमा चार महिना र बाहिरका कार्यालयमा १५ दिन देखि १ महिनापछि मात्रैै पालो आउँछ,’ भुसालले भने ।
लाइसेन्सको लागि नयाँ आवेदन वेबसाइटमा गएर बिगतका दिनहरुमा भरे जस्तै भर्न सकिन्छ । पुराना आवेदन दिएकाहरु मध्ये अझै ४ लाखले ट्रायल दिन बाँकी रहेको भुसालले जानकारी दिए । ‘पुराना आवदेकहरुको ट्रायल परीक्षा भइरहेको छ,’ उनले भने ।
– अनलाइन आवेदन भर्नका लागि सुरुमा गुगलको सर्चमा गएर onlineedlreg.dotm.gov.np टाइप गर्नुहोस् ।
– यो वेबसाइट खुलेपछि अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेशन लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोस् ।
– बायाँको कुनामा अनलाइन रजिस्ट्रेन लेखिएको हुन्छ । त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
– त्यसपछि नेपाली र सेलेक्टे लेखिएको दुईवटा बक्स देख्नु हुन्छ । सेलेक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् । न्यु लाईसेन्स सेलेक्ट गरेर प्रोसेस गर्नुहोस् ।
– अब फर्म खुल्ने छ, त्यहाँ मागेअनुसार आफ्नो व्यक्तिगत विवरण ।
– अर्को बक्समा तपाईले परीक्षा दिने सवारीसाधनको छनोट गर्नुहोस् ।
– आफ्नो अञ्चल र लाइसेन्स लिने कार्यालय छनोट गर्नुहोस् ।
– अन्तिममा क्यप्चा राखेर सबमिट गर्नुहोस् ।
– यसरी आवेदन दिएपछि तपाईंलाई रसिद प्राप्त हुन्छ । त्यसमा दिएको मितिमा कार्यालयको भिजिट गर्नुहोस् ।
सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाको लिखित परीक्षाका लागि ५ सय वटा प्रश्न दिइने छ । सोही पाँच सय प्रश्न भित्रबाटै परीक्षार्थीलाई २० प्रश्न सोधिने छ । यसै गरी प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० प्रतिशत अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने प्रावधान रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक डा.लोकनाथ भुसालले बताए । नयाँ निर्देशिकामा हालका लागि मोटर साइकल, स्कुटर र साना चार पाङ्ग्रे सवारी सधानलाई समेटेर बनाइएको भुसालले बताए । ठूला सवारी साधनका लागि पहिलेकै निर्देशिका अनुसार परीक्षा हुने उनले बताए । नयाँ निर्देशिका अनुसार सवारी चालक अनुमति परीक्षा दिन सर्वसाधारण सजिलो हुने विभागले जनाएको छ ।
लाइसेन्सको नयाँ निर्देशिका बन्यो, तर लागू भएन ! आखिर किन ? « Mero LifeStyle